www.xamarcade.com » Howlgalo ciidamada amaanka ay ka sameeyeen deegaanka Weydow oo saameyn ku yeeshay isku socodka iyo Ganacsiga.
By mohamed xalane On: 18 Mar, 2018 In: Madadaalo
Ciidamada amaanka ayaa hadda howlgalo baaritaano ah ka wada deegaanka Weydow ee duleydka Magaalada Muqdisho, ciidamadaan ayaa Xaafadaha gudaha u galaya waxaana howgalkaan uu ka mid yahay howgalkii loogu magac daray Xasilinta.
Wararka ka imaanaya deegaanka Weydow ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ka kooban Militeriy, Nabd Sugid iyo kuwoo kalaba hadda ay kawadaan deegaankaasi howlgalo baaritaano ah oo dadka lagu soo qab qabtay.
Sida wararka qaar ay tilmaamayaan ciidamadaan ayaa hadda howgalkaas ku soo qab qabtay dhalin yaro badan, kuwaas oo la sheegay in goobo leyskugu geeyay lagu baari doono dhalinyardaasi, sida ay sheegeen Saraakiisha ciidamada amniga ee howlgalkaas hogaaminaya.
Howgalkaas baaritaanada ah oo ay wadaan ciidamada amaanka ayaa saameyn balaaran ku yeeshay isku socodka dadka iyo Ganacsiga ee deegaanka Weydow ee duleydka Magaalada Muqdisho.